Tsamba yaJakobho 3:1-18
3 Hama dzangu, havasi vazhinji venyu vanofanira kuva vadzidzisi, sezvo tichiziva kuti tichawana mutongo mukuru.*+ 2 Nekuti tese tinokanganisa kazhinji.+ Kana munhu asingakanganisi pakutaura, munhu iyeye akakwana, uye anokwanisawo kudzora muviri wake wese. 3 Kana tikaisa matomu pamiromo yemabhiza tichida kuti atiteerere, miviri yawo yese inenge yava kutoita zvatinoda. 4 Fungaiwo nezvengarava: Kunyange zvazvo dzakakura chaizvo uye dzichifambiswa nemhepo ine simba, chidzoreso chidikidiki ndicho chinoshandiswa kuti dziende kunenge kuchidiwa nemutyairi wacho. 5 Saizvozvowo, rurimi inhengo diki yemuviri asi runozvikudza kwazvo. Fungai kuti zvinoda moto mudiki sei kupisa sango rakakura! 6 Rurimi runotovawo moto.+ Panhengo dzemiviri yedu, rurimi rwakafanana nenyika izere nezvakaipa, nekuti runosvibisa muviri wese,+ rwopisa upenyu hwese hwemunhu, irwo rwopiswa nemoto muGehena.* 7 Nekuti marudzi ese emhuka dzesango neeshiri nezvinhu zvinokambaira nezvisikwa zvemugungwa anogona kupingudzwa nevanhu uye vakatomboapingudza. 8 Asi hapana munhu anogona kupingudza rurimi. Harudzoreki uye runokuvadza; ruzere neuturu hunouraya.+ 9 Tinorushandisa kurumbidza Baba vedu Jehovha* asi tichirushandisawo kutuka vanhu vakasikwa “vakafanana naMwari.”+ 10 Muromo mumwe chete unorumbidza uye unotuka. Hama dzangu, hazvina kunaka kuti zvinhu zvakadaro zviitike.+ 11 Chitubu chingabuda mvura yakanaka neinovava here? 12 Hama dzangu, muonde ungabereka maorivhi kana kuti muzambiringa ungabereka maonde here?+ Uyewo chitubu chine mvura ine munyu hachigoni kubuda mvura yakanaka. 13 Ndiani akachenjera uye anonzwisisa pakati penyu? Mararamiro ake akanaka ngaaratidze kuti pazvinhu zvaanoita ane unyoro hunobva pakuva neuchenjeri. 14 Asi kana muine godo rakanyanya+ nenharo+ mumwoyo menyu, musazvikudza+ muchipesana nechokwadi. 15 Uhwu hahusi uchenjeri hunobva kumusoro; ndehwepanyika,+ ndehweumhuka, uye ndehweudhimoni. 16 Nekuti pese pane godo nenharo panoitikawo nyonganyonga nezvinhu zvese zvakaipa.+ 17 Asi uchenjeri hunobva kumusoro, kutanga, hwakachena,+ uyewo hune rugare,+ hunonzwisisa,+ hunoda kuteerera, huzere netsitsi nemabasa akanaka,+ hahusaruri,+ uye hahunyengeri.+ 18 Uyewo muchero wekururama unodyarwa murugare+ kuitira vaya* vanoita kuti pave nerugare.+
^ Kana kuti “wakaoma.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “nevaya.”